प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको घरमा भर्खरै बम बिस्फोट ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको घरमा भर्खरै बम बिस्फोट !
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको निवास आज साँझ बम बिस्फोट भएको छ ।ललितपुरको हात्तीवनस्थित यादवको निवासमा बम बिस्फोट भएको ललितपुरका एसएसपी गणेश ऐरले जानकारी दिए।सवा ८ बजेतिर बम विस्फोट भएको र यादवको घरको सिसाहरु फुटेको प्रहरीले जनाएको छ। ‘कसले र किन बम पड्काएको भन्नेबारेमा खुलेको छैन ‘एसएसपी एेरले भने।यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।
काठमाडौं– बैशाख ९ गते एमाले र माओवादी दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता घोषणा हुने व्यापक हल्ला चलेपनि एउटा कार्यक्रम मात्र भयो । भएको कार्यक्रम पनि अब्यवस्थित हुँदा निर्धारित समयभन्दा ४ घण्टा पछि सर्यो । कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिलेनै मञ्चमा राखिएको ब्यानरको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि दुबै दलका प्रमुख नेता तथा कार्यकर्ताहरुले कार्यक्रमका लागि निकैबेर कुर्नुपर्याे ।
उनले यसो भनेपछि हलमा ताली र सिटीको गढगढावट भयो । उनले हलको बाल्कोनीमा रहेका कार्यकर्ताहरुलाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै त्यहाँबाट बाहिर पठाए
सचिन परियार बारे बिमल अधिकारीले दु:खी हुदै स्ट्याटस सहित मिडियामा (भिडियो सहित)